कुन प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री ? उनीहरुको यस्तो छ प्रोफाइल | Ekhabaronline.com
| प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ २९, २०७४ 8:46:17 AM | 57 पटक पढिएको |
मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि संविधान कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएअनुसार सातै प्रदेशले पाउने मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागिसकेको छ ।
संघीयता कस्तो होला रु कसरी काम होला ? जनतामा के परिवर्तन आउला ? भन्ने आमजनताको जिज्ञासाको जवाफ प्रदेश सरकार गठन भएपछि मिल्ने निश्चित भएको छ । अहिले धेरैको चासो मुख्यमन्त्री को बन्ला भन्नेम केन्द्रित छ ।
प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा एमालेका नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश २ मा फोरम नेता लालबाबु राउत गोद्दारलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरिसकेका छन् ।
प्रदेश ३, ४ र ५ मा एमाले नेता क्रमशस् डोरमणि पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । माओवादीको भागमा परेको प्रदेश ६ मा महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेश ७ मा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बन्दैछन् ।
प्रदेश १ – शेरधन राई
प्रदेश २ – लालबाबु राउत
लालबाबु राउत गद्धी पर्साको साविकको जगरनाथपुर गाविस–३ मा बुवा दशरथ र आमा राधिका राउतको कोखबाट २०२३ सालमा जन्मिएका हुन् । उनले राजनीतिक यात्रा नेपाली कांग्रेसको मातृ संगठन नेपाल विधार्थी संघबाट सुरु गरे ।राजधानी मागेको वीरगन्जले पायो मुख्यमन्त्री ।
प्रदेश ३ – डोरमणि पौडेल
डोरमणि पौडेलको जन्म २००४ सालमा भएको हो । हेटौंडाको विकासका योजनाकार पौडेल २०६४ र २०५४ मा हेटौंडा नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचत भए । एक दशक मेयर बनेर काम गरेका उनलाई अबको पाँच वर्ष प्रदेश नम्बर ३ मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर मिलेको छ । ७० वर्षीय पौडेल ३८ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। २०५४ सालदेखि निरन्तर नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष रहेका उनी राजनीतिक मुद्दामा चार पटक कैद सजाय र १८ पटक प्रहरी हिरासतमा परेका छन् ।प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा डोरमणि पौडेल नियुक्त
प्रदेश ४ – पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पार्टीमा भलाद्मी र बौद्धिक नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनको जन्म २०१४ साल फागुन १ गते गंगाप्रसाद र चिनी गुरुङका छोराका रुपमा गिलुङ गाविस ८, टक्सार ९हाल क्होला सोंथार गाउँपालिका–९, टक्सार, लमजुङ० मा भएको हो । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ शिक्षकदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मविज्ञानमा स्नातक गुरुङ पञ्चायतकालमै २०३४ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका थिए । सुरुमा शिक्षण पेशामा आवद्ध उनी त्यहीँबाट राजनीतिमा होमिएका थिए । शिक्षणमै हुँदा आन्दोलनमा उत्रेकाले उनी पटक पटक पञ्चायतकालमै प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । २०४० मंसिरमा उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको जिल्ला अध्यक्षमा निर्वा्चित भएका थिए ।
नेता गुरुङले ४ नं प्रदेशमा गुरुङसँगै मगर भाषालाई पनि कामकाजी भाषामा प्रयोगमा ल्याइने बताएका छन् । गुरुङमाथि उपाध्यक्ष अशोक राईले एमाले छाड्दा र त्यही क्रममा पार्टीमा चर्को जातीय राजनीति गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।
प्रदेश ५ – शंकर पोखरेल
शंकर पोखरेल एमालेभित्र वैचारिक र सांगठनिक कार्यशलता भएको नेताको रुपमा चिनिन्छन् । भारतमा अध्ययनरत भएका बेला उनी प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरुको नेताको रुपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावकै समयमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी पेश गर्दै पोखरेलले प्रदेशसभाबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् । सात प्रदेशमध्ये उनी मात्र निर्विकल्प मुख्यमन्त्रीको रुपमा चुनावी मैदानमा गएका थिए ।
आइतबार मात्र प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीको एक मात्र बहुमतसहितको दाबीपत्र प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झालाई बुझाएका छन् । यो पत्रसँगै प्रदेश ५ मा उनी मुख्यमन्त्री बन्ने पकका भएको हो ।
प्रदेश ६ – महेन्द्रबहादुर शाही
महेन्द्रबहादुर शाहीको जन्म २०३३ साल माघ १५ गते कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका ९साविकको नानिकोट गाविस ८० लालबहादुर र आमा रनकौडा शाहीको कोखबाट भएको हो । उनी दुई वर्षकै हुँदा उनका पिताको निधन भएको थियो । शाहीसँग राजनीतिक र फौजी दुबै मोर्चामा काम गरेको अनुभव छ । ०५२ सालको सशस्त्र जनयुद्धको सुरुदेखि नै उनी भूमिगत भए ।माओवादी नेता शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो ।
२०५३ सालमा मध्यमान्चलको गुरिल्ला गठनमा सदस्यदेखि लडाकू जीवनमा प्रवेश गरेका शाही राजनीतिक र सैन्य जिम्मेवारीमा निरन्तर रहे । युद्धताका उनले बुटवलदेखि दार्चुलासम्म भएका युद्धको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे ।
प्रदेश ७ – त्रिलोचन भट्ट
उनी २०४७ सालदेखि नेकपा एकता केन्द्रमा आबद्ध थिए । अहिले उनी माओवादी केन्द्रको डोटी जिल्लाका इञ्चार्ज र पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । २०६४ र २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित भट्ट प्रदेशसभा चुनावमा डोटी क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन् ।